EGBUGBU: OGOLOGO OGE MBEREDE NA ZAMFARA-SENATOR
Previous EKITI: ỤWA DUM NA-ELE ANYI ANYA -OKEI-ODUMAKIN
Next MALALA NA-AMA UDA IWU IWU NKE NWA TRUMP
Otu onye so n’Òtù Mba Nile, Sen. Saidu Dansadau, agwala ndị gọọmenti Federal ka ha kwupụta na ndị uwe ojii nọ na Zamfara na-egbu ọchụ na steeti.
Dansadau, onye bụ onyeisi oche, National Rescue Movement (NRM), mere oku ahụ mgbe ọ na-akọrọ ndị isi akụkọ na steeti Zamfara na Abuja.
O chetara na o nwere na 2016 edere ya na ndị isi oche maka ọnọdụ mberede na steeti na ịhọpụta onye nlekọta ruru eru tupu igbu egbu na mbibi ka njọ “ma a kpọghị oku ahụ ‘.
O kwuru na n’agbata afọ 2016 na June, 2018, mmadụ 2,992 egbuola, 682 obodo ndị “iro” na N1, 161, 305, 200 gbakọtara dị ka ihe mgbapụta maka ndị a jidere.
Dansadau kwukwara na n’agbata oge ahụ, a gbara anụ ọhịa 2,706 ọkụ ma bibie mgbe ehi 13,838 na ehi na eburu anụ na ebulu 11,088 na ụgbọala 2,244 ezuru n’obodo.
O kwuru na ndị ntorobịa na ndị isi ọdịnala nke obodo dị iche iche gbakọtara data banyere ihe ndị ahụ.
O kwuru na aha ndị e gburu egbu na ndị nwe ihe onwunwe e bibiri ha niile edere n’akwụkwọ.
Onye isi omebe iwu, bụ onye na-anọchite anya Zamfara Central Senatorial District, kwuru na akwụkwọ ahụ, bụ nke a na-enye ndị na-ede akụkọ ozi ọma, adịghị ekwubiga okwu ókè n’ihi na ndị ntorobịa edepụtara data dịka ụlọ.
Dị ka ya si kwuo, ndị ntorobịa maara nke ọma ndị mmadụ na obodo ndị ahụ.
“Enwetala m akwụkwọ ozi na mbụ maka onyeisi oche iji kwupụta ọnọdụ mberede na Zamfara na 2016 mana ọ dịghị ihe e mere banyere ya. Emere m akwụkwọ edemede na-esochi ya, ma ọ dịghị ihe kpatara ya.
“N’akwụkwọ ozi ahụ, m rịọrọ ka President Muhammadu Buhari weghachite ihe ndị ọzọ iji jide njide nke igbu ọchụ na-enweghị isi na Zamfara.
“Agwara m ya ka ọ rịọ ike ya n’okpuru ngalaba 305 (3) na (5) nke Iwu ahụ ma kwupụta ọnọdụ nke mberede na Zamfara ma họpụta onye nlekọta ruru eru maka steeti.
“Nke a bụ ikwe ka onye nchịkwa na-elekọta ya ruo mgbe onyeisi oche, site na onye nchịkwa, kwetara na e weghachitere ya.
“Ọ bụrụ na a rịọrọ arịrịọ anyị maka nkwupụta ọnọdụ mberede na Zamfara, a ga-azọpụta ihe onwunwe a na ndị a niile. ‘”
Dansadau kwukwara na ọnọdụ ahụ dara njọ n’ihi ọchịchị nchịkwa gọọmentị Alhaji Abdul-Aziz Yari.
O boro onye ochichi ebubo na ya enweghi ibu oru ya iji chebe ala.
N’ihi nke a, ọ rịọrọ Gen.Yakubu Gowon “dịka onye isi oche nke Isi oche nke Ọchịchị iji mee ka ndị nnọchiteanya niile nke ndị isi na ndị isi obodo gaa na Villa Villa iji mee ka Onyeisi ahụ kwupụta na ọ bụ na Zamfara.
Dansadau kpọkwara ndị isi oche nke Senate, ndị na-ekwuchitere Ụlọ Ụlọ Nnọchiteanya na ndị isi niile na-ekpe ikpe na-abịa.
O kwuru na “nke a bụ n’ihi na ihe ọ bụla gọọmentị, nke na-adịghị ekwupụta ihe mberede ahụ, agaghị emepụta ihe ọ bụla dị mma n’ihi eziokwu dị na ala.
MIRACLE, BBNAIJA ‘UGBORO ABUO’ NWETARA IKIKE PILOT
“Ndị Zamfara kwenyere na Gov. Yari na onye nnọchiteanya ya, Ibrahim Wakkala, so na nsogbu ahụ na steeti n’ihi na otu akụkụ nke ndị ọrụ kachasị elu bụ ndị na-agwa ha.
“Eziokwu ahụ bụ na Yari kwusiri ike dị ka onye isi nchebe nke obodo ahụ na-egosi adịghị ike ya, nkwenye na enweghị isi iji nọgide na-arụ ọrụ dị ka gọvanọ ma na-atụ anya na ndị mmadụ ga-enwere onwe ha pụọ ​​n’aka ndị omempụ.” ‘
Dansadau, kọwara, na oku a na-akpọ ịkpọsa na mberede na steeti adịghị n’ụzọ ọ bụla iji wepụ gọvanọ na onye nnọchiteanya ya.
Mana, o gbara ndi isi ochichi Naijiria ume ka ha weputa Yari ozugbo n’oru oche ya, na-ekwu na gọọmenti na-ejikarị ìgwè ahụ eme ihe mgbe nile ka ha pụọ ​​na steeti.
hot hot news HOTNEWS Isimbido isimbido news ISIMBIDONEWS isimbidopost ISIMBIDOPOSTS ISIMBIDOTV killing LATEST news NIGERIA NIGERIAN north northern POLITICS post posts state zamfara